तपाईं यी चरणहरूको साथ फार्मासिष्ट तनाव कम गर्न सक्नुहुन्छ - कम्पनी, समाचार | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन प्रेस समाचार, कल्याण कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी समाचार कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कम्पनी, समाचार >> तपाइँको ओभरवर्क फार्मासिष्टलाई कसरी मद्दत गर्ने
तपाईंको स्थानीय चेन फार्मेसी वरपर हेर्नुहोस्। तपाईं थकित, धेरै काम भएको, र तनावग्रस्त फार्मासिष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एक व्यक्ति, जसले सम्भावित रूपमा १२ घण्टा पाली (अक्सर ब्रेक बिना) काम गरिरहेको छ, फोन स hundreds्केत गर्दा प्रशासनिक, सटिकता र उचितताको लागि सयौं नुस्खेहरू प्रमाणित गर्ने जिम्मा दिइन्छ। फ्लू शटहरु र अन्य खोपहरू, औषधि सल्लाह दिने, बिमा जानकारी प्रमाणीकरण गर्ने, विभिन्न मुद्दाहरूको लागि तपाईंको डाक्टरलाई कल गर्ने, र ग्राहकहरूलाई भित्र जाँदा जाँच गर्ने। त्यहाँ मद्दत गर्न फार्मेसी टेक्निशियनहरू छन्, तर यो पर्याप्त छैन। यसले तपाईंको भलाईलाई कसरी असर गर्छ?
को न्यू योर्क टाइम्स हालसालै एउटा अत्यधिक दवाव फार्मासिष्टहरू छन् र उनीहरूले रोजगारदाताहरू र राज्य बोर्डहरूलाई बोझ कम गर्नका लागि अनुत्तरित निवेदनहरू वर्णन गर्ने लेख प्रकाशित गरे। यी पेशेवरहरूले एक रेकर्ड ब्रेकि filled भरी ..8 अर्ब २०१ in मा प्रिस्क्रिप्शनहरू, र उनीहरूलाई एक ब्रेक चाहिन्छ just तिनीहरूको विवेकका लागि मात्र होइन, तर तपाईंको सुरक्षाको लागि।
यो किनभने फार्मासिस्ट बढी विचलित छ, एक औषधि त्रुटि देखा पर्न सम्भव छ। कृपया सहयोग, एक मा फार्मासिस्ट टाइम्स टुक्रा कथित उसको वा उनको राज्य बोर्डमा (अज्ञात) लेखिएको थियो। अर्कोले भने: म जनताको लागि खतरा हुँ। अर्को शब्दमा, फार्मासिस्ट तनाव एक वास्तविक समस्या हो।
के तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन सहि भरिएको छ?
फार्मासिष्टहरू कम रोजगारमा थप नक्कलहरू भर्नका लागि उनीहरूको रोजगारदाताहरूबाट बढ्दो दबावमा छन्। अवश्य पनि, तपाईंको फार्मासिष्टले तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन सही ढ filled्गले भरिएको छ भनि निश्चित गर्न कदम चाल्छ, तर वितरण गल्तीहरू हुन सक्छ र हुन सक्छ। एक मा अध्ययन pharma० फार्मासिष्टहरूले भरिएका प्रिस्क्रिप्शनहरू जाँच गर्दै, यी of१ पेशेवरहरूले उनीहरूको पछि लागेका वर्षमा कम्तिमा एउटा प्रबन्ध गल्ती गरे।
माइकल जे भन्छन्, गल्तीहरूको सम्भावनाको बारेमा उपभोक्ताहरू सचेत हुनुपर्दछ तर डराउँदैनन् र जान्नुपर्दछ कि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन ती त्रुटिहरू पहिचान गर्न र रोक्न प्रत्येक पटक भर्ने प्रिस्क्रिप्सन उठाउँछन्, चाहे यो नयाँ हो वा रिफिल हो,। Gaunt, Pharm.D।, औषधि सुरक्षा विश्लेषक र मा सम्पादक सुरक्षित औषधि अभ्यासहरूका लागि संस्थान (ISMP) यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सटीकताको लागि डबल जाँच गर्न:
तपाइँ एकै समयमा benadryl र claritin लिन सक्नुहुन्छ
झोला खोल्नुहोस् र बोतलमा लेबल जाँच गर्नुहोस् तपाईं फार्मसी काउन्टरबाट टाढा हिंड्नु अघि। मान्नुहोस् कि कुनै त्रुटिहरू मात्र गल्तीहरू टाइप गर्दै छन्, डा। गौंट भन्छन्। गलत हिज्जे नामको अर्थ तपाइँको कसैको औषधि औषधि छ।
औषधि हेर्नुहोस् । यदि यो तपाईंको तेस्रो रिफिल हो र पिलहरू सँधै नीलो हुन्छन्, र अब, अचानक, तिनीहरू रातो हुन्छन्, फार्मासिष्टलाई गोलीका लागि जाँच गर्नुहोस्।एक सूचित बिरामीले जहिले पनि गरेको त्रुटि समात्छ, ब्राडी कोल, आर। पीएचएच, को मालिक भन्छन्। सहयोगी फार्मासिस्ट । जबकि यो सम्भव छ कि विभिन्न गोलीहरू एक निर्माता परिवर्तनको कारणले गर्दा हो, यो त्रुटि हुनसक्दछ, त्यसैले सधैं सोध्नु उत्तम हो।
बिरामी जानकारी पुस्तिका पढ्नुहोस् र यो निश्चित गर्दछ कि यो औषधी तपाईको बोतलमा सूचीबद्ध छ। यदि केहि पनि राम्रो लाग्दैन भने, फार्मासिष्टको साथ जाँच गर्नुहोस्।
फार्मासिस्टको तनाव कम गर्न मद्दत कसरी गर्ने
फार्मासिष्टको लामो घण्टा र प्रेशर कुकर कार्य वातावरणको बारेमा तपाईंले गर्न सक्ने धेरै छैन। तर तपाईं तिनीहरूको कार्यहरू सजिलो बनाउन, र फार्मासिष्ट बर्नआउट यी थोरै सुझावहरूको साथ अलि कम सम्भावना बनाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको डाक्टरलाई औषधीको प्रयोग सिधा पर्दामा लेख्न भन्नुहोस्।
यसले तपाईंको फार्मासिष्टले सटीक जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ, खास गरी यदि तपाईंको औषधि 'अफ-लेबल' सर्तको उपचार गर्न प्रयोग भइरहेको छ, डा। गौंट वर्णन गर्दछन्। यसले तपाईंको फार्मासिष्टलाई सही औषधी छान्न मद्दत गर्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंको डाक्टरको हस्तलेखन पढ्न गाह्रो छ भने। यो प्रिस्क्रिप्शनहरूको लागि पनि उपयोगी छ जुन इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाइन्छ र यो सुनिश्चित गर्दछ कि डाक्टरले दवाव चयन गरे जुन संकेतसँग मेल खान्छ।
स्वचालित रिफिल प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्।
फोन कार्यप्रवाह कोल नोटहरूमा ठूलो अवरोध हो। तपाईंले कसैसँग कुरा गर्न आवश्यक पर्दैन पुनःफिल सोध्न वा तपाईंको औषधि तयार छ कि छैन भनेर हेर्न। यी चीजहरू टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ, जस्तै स्वत: रिफिलहरू र पाठ सतर्कताहरू। यदि तपाईं रिफिलहरूको बाहिर हुनुहुन्छ भने, फार्मेसीलाई नयाँ प्रिस्क्रिप्सनको लागि सम्पर्क गर्नको लागि केही दिन अघि कल गर्नुहोस्।
एकलकेयर जस्ता प्रस्तुत कुपनहरू वा डिस्काउंट कार्डहरू जब तपाईं आफ्नो प्रिस्क्रिप्शन बन्द गर्नुहुन्छ।
यदि तपाइँले लिन सम्म प्रतीक्षा गर्नुभयो, लेनदेन नयाँ, छूट मूल्यहरू प्रतिबिम्बित गर्न पुनःप्रक्रिया गर्नुपर्नेछ - जुन तपाइँलाई फेरि लाइनमा पर्खनु पर्दछ। र कुपनको बारेमा कुरा गर्दै, तपाईं फार्मसीमा पुग्नु अघि कुन चाहानुहुन्छ प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने निर्णय गर्नुहोस्। जबकि तपाईको फार्मासिष्टले मद्दत गर्न चाहान्छ, तिनीहरूसँग तपाईसँग उत्तम विकल्प खोजी गर्न समय हुँदैन। पहिले आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्। र हामीबाट एक प्रो बचत टिप प्रयोग गर्नुहोस्: सधैं सम्भव भए जेनेरिक प्रयोग गर्नुहोस्!
प्रिस्क्रिप्शन खरीदहरूको लागि फार्मेसी काउन्टर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग धेरै गैर-फार्मेसी आईटमहरू किन्नु छ भने, फार्मेसीमा तपाईंको प्रिस्क्रिप्शनको लागि भुक्तान गर्नुहोस् र बाँकीलाई अर्को काउन्टरमा जाँच गर्नुहोस्। त्यो भइरहेको छ, यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने एकलकेयरको साथ ओभर-द-काउन्टर औषधिहरू खरीद गर्दै वा अर्को बचत कार्ड, तपाईंले यसलाई फार्मेसी काउन्टरमा गर्नुपर्नेछ। मात्र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग पहिले ओटीसी आईटमको लागि प्रिस्क्रिप्शन छ।
बन्द हुने समयको बारेमा सावधान हुनुहोस्।
बन्द गर्नु भन्दा पहिले नदेखाउनुहोस् र प्रतीक्षा गर्नुहोस् जब तपाइँको नुस्खे भरिन्छ। फार्मासिष्टका परिवार र जीवन छन् तिनीहरू रमाइलो गर्न चाहन्छन्, र त्यो लामो पारी पछि थकित छन्।
साना चीजहरू तपाईंले प्रत्येक भ्रमणमा गर्न सक्नुहुनेछ लामो यात्रा गर्न सक्दछन् जब उनीहरूमा एक बर्षको मूल्यवान नुस्खेमा गुणा गरिन्छ। र जब तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईंको फार्मासिष्ट र प्राविधिकहरूले गर्ने सबै मेहनतको लागि धन्यवाद भन्न नबिर्सनुहोस्!
Tadalafil खुराक, फारम, र शक्तिहरू
के म ibuprofen 800mg संग tylenol लिन सक्छु?
एन्टीबायोटिक्स लिए पछि कति समय म प्रोबायोटिक्स लिन सक्छु
मधुमेह को लागी सामान्य रक्त शर्करा स्तर के हो?
कति बिरामीहरु मधुमेह को केहि रूप छ?